မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ လီဗာပူး တို့ကြား အဓိက ကွာခြားချက် တစ်ခု ကို ပြောပြလိုက်တဲ့ ဖာဒီနန် ————————————————————————————– အင်္ဂလန် နောက်ခံလူ ဟောင်း ရီယို ဖာဒီနန် က မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း နဲ့ လီဗာပူး အသင်း တို့ကြား ဒီရာသီ အဓိက ကွာခြားချက် ဟာ အဆိုပါ နှစ်သင်း ရဲ့ ယုံကြည်ချက် ပဲ လို့ မှတ်ချက် ပေးသွား ခဲ့ပါတယ်။ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ မာဆေးဆိုက် အခြေစိုက် ကလပ် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေး ဇယား ရဲ့ ဒုတိယနေရာ မှာ ရပ်တည် နေပြီး ထိပ်ဆုံး က မန်ချက်စတာ စီးတီး နဲ့ […]
October 25, 2018 October 25, 2018 AuthorLeaveaComment on “နှုတ်ကြောင့်သေ”
“နှုတ်ကြောင့်သေ” —————– စကားကို မဆင်မခြင် ပြောခြင်းဟာ မကောင်းဘူး။ စကားဆိုတာ ပြောပြီးသွားရင် ပြန်သိမ်းယူလို့ မရတော့ဘူး။ ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်လို့ မရတော့ဘူး။ စကားကြောင့် သူတပါးရဲ့ မုန်းတီးမှု အမြင်ကပ်မှု ခံရတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လူအတော်များများ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စကားကို မဆင်မခြင် ပြောမိလို့ အသက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုကိုတော့ လူသိနည်းကြပါတယ်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။၁၈၂၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ရုရှားနိုင်ငံကို အုပ်စိုးတဲ့ ဇာဘုရင်ကြီး အလက်ဇန္ဒား နတ်ရွာစံတော်မူလို့ သားအငယ် နစ်ကလတ်စ်(၁)ဟာ နန်းတက်လာပါတယ်။ သူ နန်းတက်ပွဲကျင်းပနေချိန်မှာ ရှေးရိုးဆန်တဲ့ သူ့ကို သစ္စာမနာခံလိုဘူးဆိုပြီး စစ်တပ်က အရာရှိ၊ စစ်သား နဲ့ အရပ်သား အယောက် ၃၀၀၀ […]
မိမိတို့ အနေနဲ့ ပေါ့ဘာကို လေးစားမှု ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ချီလီနီ ပြောဆို
October 24, 2018 October 24, 2018 AuthorLeaveaComment on မိမိတို့ အနေနဲ့ ပေါ့ဘာကို လေးစားမှု ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ချီလီနီ ပြောဆို
မိမိတို့ အနေနဲ့ ပေါ့ဘာကို လေးစားမှု ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ချီလီနီ ပြောဆို ========================================= ဂျူဗင်တပ် အသင်း နောက်ခံလူ ချီလီနီက ၎င်းတို့ အသင်း အနေနဲ့ မန်ယူ အသင်း ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာကို လေးစားမှု ရှိနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကစားသမားကို ဂျူဗင်တပ် အသင်းကို ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့လာမယ့် သတင်းတွေ အတွက်တော့ သူက ပြောဆိုခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ မန်ယူ အသင်း ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာဟာ ယနေ့ညမှာ အသင်းဟောင်း ဂျူဗင်တပ် အသင်းနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ် အဖြစ် ရင်ဆိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ် အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် နောက်ဆုံး ၂ ပွဲစလုံး […]
နောက်ကျော ဒဏ်ရာ ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဟာဇက်
October 24, 2018 October 24, 2018 AuthorLeaveaComment on နောက်ကျော ဒဏ်ရာ ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဟာဇက်
နောက်ကျော ဒဏ်ရာ ရရှိထားခဲ့တဲ့ ဟာဇက် ============================ ချဲလ်ဆီး အသင်း ကစားသမား ဟာဇက်ဟာ နောက်ကျော ဒဏ်ရာ ရရှိထားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ကစားသမား ဖြစ်သူဟာ မန်ယူ အသင်းနဲ့ တစ်ဖက် ၂ ဂိုးစီ သရေကျထားခဲ့တဲ့ အိမ်ကွင်း ပွဲစဉ်မှာ ချဲလ်ဆီး အသင်း အတွက် ကစားရင်း ဒဏ်ရာရခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းကြောင့် သူဟာ ဘိတ်ဘိုရီဆော့ဗ် အသင်းနဲ့ ကစားရမယ့် ယူရိုပါလိဂ် ပွဲစဉ် အပြင် ဘန်လေ အသင်းနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်ကိုပါ လွဲချော်နိုင်ကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်နေပါတယ်။ ဟာဇက်ဟာ ယခုရာသီ နောက်ဆုံး ၁၁ ပွဲမှာ ၈ ဂိုး အထိ သွင်းယူထားခဲ့တဲ့ ကစားသမား […]
October 16, 2018 October 16, 2018 AuthorLeaveaComment on “လူနှင့်​တန်​ဖိုး”
လူနှင့်​တန်​ဖိုး ————- လောကမှာ ပျိုရွယ်နေချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ အိုရွယ်နေချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်နဲ့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အကျိုးရှိရှိအလုပ်တွေလုပ်ပီး နေထိုင်သွားဖို့ လိုတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူပိုတစ်ယောက် ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံပါနဲ့ ။ဘယ်အလုပ်ကို လုပ်လုပ်၊ ဘာပဲစပြောင်းလဲပါစေ ကိုယ်က အရင်စရတယ်။ကိုယ်ကစပြီးမလုပ်ဘဲ သူများကို သွားအပြစ်တင်တဲ့လူက အလားကားပဲ။ကိုယ့်အတွက် သူတပါး ၀န်မပိုပါစေနဲ့ ၊ ၀န်မပိပါစေနဲ့ ။ ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အခက်ခဲတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပြီး နေရမယ်။ လူပိုတစ်ယောက်ဖြစ်လာပီဆို လောကမှာ အဲ့ဒီလူဟာအမှိုက်တစ်စပါပဲ။ သူ့ အတွက်လည်း အမှိုက်ပိုရှုပ်တယ်။လောကမှ လုပ်အားတွေ အများကြီးလိုပါတယ်။ လိုနေတဲ့နေ ရာတွေကို ကိုယ်လည်း ၀င်ဖြည့်ပေးရမယ်။ လူပိုဖြစ်မနေအောင် နေဖို့ လိုတယ်။တကယ်တမ်း ကိုယ်သာ အသုံးဝင်မယ်ဆိုရင် မိသားစုမှာလည်း ကိုယ်ဟာလိုအပ်ပါတယ်၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလည်း ကိုယ်ဟာ လိုအပ်ပါတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ကိုယ်ဟာလိုအပ်တာပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ အသုံးဝင်မှုကို သူများတွေသိဖို့ ထက် […]
October 14, 2018 October 14, 2018 AuthorLeaveaComment on “အ​ဓိက ဆိုတာ”
အ​ဓိက ဆိုတာ ✏ ✏ ✏ ✏ ✏ တစ်​ခါက မြို့တစ်​မြို့မှာ လက်​လုပ်​လက်​စားမြင်းလှည်း​မောင်းတဲ့လူတစ်​​ယောက်​ရှိတယ်​သူ့ အိမ်​မှာ ကြက်​​ဖ​လေးတစ်​​ကောင်​ ဝက်​​က​လေး တစ်​​ကောင်​ ဘဲက​လေးတစ်​​ကောင်​ ​ကိုလည်း​မွေးထား​သေးတယ်​တစ်​ရက်​ မြင်းလှည်းသမားက မြင်းကိုအနား​ပေးချင်​တာနဲ့ လှည်းမ​မောင်းပဲ မြင်းကို လှန့်​ထားလိုက်​တယ်​စားကျက်​ထဲမှာ မြင်းရယ်​ ဝက်​ရယ်​ ဘဲ ရယ်​ကြက်​ရယ်​ဆုံကြတယ်​ကြက်​ကလည်းသူ့ သဘာဝ​မြေ​တွေကိုယက်​ပိုး​ကောင်​​လေး​တွေကိုရှာစားတယ်​ဘဲကလည်း တီ​ကောင်​​လေး​တွေ ခရု​တွေကို ရှာစားတယ်​ ဝက်​ကလည်း ​မြေကိုတူးပြီး အစာရှာစား​နေတယ်​အဲ့အချိန်​မှာ မြင်းက ထ ဟီးလိုက်​တယ်​တိုးတိုး​အော်​ပါ ကိုမြင်းရယ်​ဒီမှာ အစာရှာပျက်​ တယ်​ဆိုပြီး မြင်းကို​ပြော​တော့ဘယ်​တတ်​နိုင်​ပါ့မလဲ ကြက်​က​လေးရယ်​ငါ့ သဘာဝ ကိုက ဒီလိုဖြစ်​လာတာမနက်​ခင်း မင်းတို့ တွန်​သလို​ပေါ့ကျွန်​​တော်​တို့ တွန်​တာက စည်းကမ်းရှိတယ်​ကိုမြင်းရဲ့လင်းတက်ချိန်​ အာရုံချိန်​​တွေမှာ လူ​တွေအတွက်​အချက်​ပြ​ပေးတာပါ ခင်​ဗျားက အား​နေဟီး​နေတာ​ဘေးလူလည်းကြားမ​ကောင်းလိုက်​တာဝက်​က ထရယ်​ တယ်​ ဟုတ်​တယ်​ ဟုတ်​တယ်​ကြက်​က​လေး […]
October 12, 2018 October 12, 2018 AuthorLeaveaComment on “လူသုံးယောက်”
လူသုံးယောက် ======= တစ်ခါက လူသုံးယောက်ဟာ သစ်တောလမ်းစုံတစ်ခုမှာ တွေ့စုံမိရင်း တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြသတဲ့ ။ ပထမ တစ်ဦးက မိမိက ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ ဆေးဥ ဆေးမြစ် ဆေးရွက်တွေကို လာရှာဖွေကြောင်းပြောသတဲ့ ။ ဒုတိယ တစ်ဦးက မိမိသည် အိမ်ဆောက်ရန်အတွက် ကျစ်လစ်ခိုင်မာတဲ့ အိမ်တိုင်တစ်ချောင်း လာခုတ်ကြောင်း ပြောသတဲ့ ။ နောက်ဆုံး တစ်ဦးမှာကျွန်ုပ်ကတော့ ထင်းခုတ်သမား ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားရင်း မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ကြပါတယ် ။ သူတို့ သုံးဦးစလုံး မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသည့်နောက် ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် သုံးဦးစလုံး သစ်တောကြီးထဲကို ၀င်လာကြရင်း ၊ တစ်နေရာအရောက်မှာ အိမ်တိုင်ခုတ်ရန် လာသူက (၈)လက်မ ပတ်လည်ခန့် ကျစ်လစ်ဖြောင့်တန်းသည့် သစ်တပင်ကိုတွေ့လိုက်သည့်နှင့် မိမိလိုချင်သည့် သစ်တိုင်တော့ တွေ့ပြီဟု တွေးကာ ဖြောင့်တန်းသော သစ်ပင်ကို […]
“တန်ဖိုးတက်ဖို့ စွမ်းရည်ကို အသုံးချစို့”
October 11, 2018 October 11, 2018 AuthorLeaveaComment on “တန်ဖိုးတက်ဖို့ စွမ်းရည်ကို အသုံးချစို့”
“တန်ဖိုးတက်ဖို့ စွမ်းရည်ကို အသုံးချစို့” ————————————– လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်ကို ကိုယ်တိုင်က သိရှိတဲ့သူ ရှိသလို၊ မသိရှိတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ စွမ်းရည်ကို မသိရှိတော့ အသုံးမချတတ်ဘူး။ အသုံးမချတတ်တော့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်မရောက်ဘူး။သိရှိပေမယ့် အသုံးမချတတ်ရင်လည်း ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကို မရောက်နိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းရည်ကို သိရှိတယ်၊ အသုံးချတတ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေချင်တာကတော့ စွမ်းရည်ကိုအုပ်စု(၂)စု ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ Hard Skills နဲ့ Soft Skillsပါ။ အဲဒီစွမ်းရည်တွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်မှသာကိုယ့်မှာဘယ်လို စွမ်းရည်တွေ ရှိနေသလဲ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းခွင်မှာ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ ကိုယ့်အလုပ်ခွင်မှာဘယ်လိုစွမ်းရည်တွေ ပြန်အသုံးချရင် ကိုယ့်ဆန္ဒကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတာကို သိရှိမှာဖြစ်တယ်။Hard Skills ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ဥာဏ်ရည်ကို မှီတည်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ […]
October 7, 2018 October 7, 2018 AuthorLeaveaComment on “ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းပြောတဲ့ စာဖတ်ခြင်း “
“ဆရာကြီးဦးအောင်သင်းပြောတဲ့ စာဖတ်ခြင်း ” ————————- ခွေးတစ်ကောင်ဟာမီးခဲကိုနင်းမိရင်ဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲ ဒါပဲနောက်တစ်ကောင်ကထပ်နင်းမိလည်းဂိန်! ဂိန် ဂိန်အော်ပြီး ထွက်ပြေးသွားတာပဲသူနင်းမိလို့ပူတဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခြားခွေးတွေကိုမနင်းမိစေနဲ့ ပူတယ်လို့်မပြောနိုင်ဘူးသူ့ အတွေ့ အကြုံကို လက်ဆင့်မကမ်းနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ ဘာသာစကားမရှိလို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်မှ ကိုယ်တိုင်သိရတာ ကမ္ဘာဦးအစခွေးတွေ ကနေဒီနေ့ခွေးတွေအထိ ဂိန်! ပဲတို့တစ်တွေလူတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘာသာစကားရှိတယ် မင်းတို့ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်ပါးသူရဲ့အတွေ့အကြုံလက်ဆင့် ကမ်းလာတာအမေဖြစ်သူကအဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ပူပူအဲ့ဒါမကိုင်နဲ့ ဝေါ့ဝေါ့မင်းကိုင်ပါဦးမလား မင်းအမေရဲ့အတွေ့အကြုံလက်ဆင့်ကမ်းမှုကြောင့်မင်း မီးကို အပူမှန်းသိသွားတယ်ဝေါ့ဝေါ့ဆိုတာကို ရွံစရာမှန်းသိသွားတယ်အောက် ဆီဂျင်ကိုခုချက်ခြင်းမင်းဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာမင်းရှာဖွေထုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုမင်းရှာတွေ့ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ရှာတွေ့ခဲ့ တဲ့ပညာရှင်ကလက်ဆင့်ကမ်းခဲ့လို့ မင်းချက်ခြင်းဖော်ထုတ်နိုင်တယ်ဒါ အတွေ့အကြုံကိုလက်ဆင့်ကမ်းတာပဲပညာသင် တယ်ပညာ ရှာတယ် ဆိုတာဒါပဲလေဘာသာစကားရှိလို့တစ်ပါး သူရဲ့အတွေအကြုံကိုလက်ဆင့် ကမ်းနိုင်တယ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ် ဆင့်လက်ဆင့် ကမ်းကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းလူ့လောကကြီးကတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာပေါ့အတွေးအကြံ အတွေ့အကြုံကို လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့နေရာမှာနှစ်မျိူးရှိတယ်တစ်ခုက တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပို့ချခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစာအုပ်ထဲမှာ ချရေးထားခဲ့ပြီး လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာဥပမာအောင်မြင်သူတွေရဲ့အထုပ္ပတ္တိတွေကို ဖတ်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့အတွေးအကြံ အတွေ့အကြုံတွေ မင်းရလာမယ်မင်းစိတ်ဓာတ်တွေမာကျောလာမယ်အထပ်တလဲလဲ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်အောင်မြင် သူတွေလည်း အခက်အခဲတွေကြားကရုန်းထကြတာကိုးဒါမို့ စာဖတ်ခိုင်းတာစာဖတ်တဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းဖတ်မိတောင် […]
October 6, 2018 October 6, 2018 AuthorLeaveaComment on “အက်နေသောအိုး”
“အက်နေသောအိုး” —————— ရေထမ်းသူတစ်ဦးသည် ရေကန်မှ ရေကို အိုးကြီး ၂ လုံးဖြင့် စလွယ်သိုင်းကာ သူတို့နေထိုင်ရာရပ်ကွတ်ထဲတွင် လှည့်လည် ရောင်းချ သည်။ယင်းအိုး ၂ လုံးထဲမှ တစ်လုံးတွင် အတန်ငယ်ကြီးသောအက်ကြောင်း တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် ရေဖြည့်ပေးသောနေရာသို့ ရောက်သောအခါ ရေအပြည့် မပါဘဲတစ်ဝက်သာ ပါလာလေသည်။ဤသည်ကို အပြစ်ရှိသလို ခံစားလာရသော အက်ကွဲကြောင်း ပါသောအိုးက – “သ ခင်၊ သင့်မှာ ကြိုးစားပမ်းစား ရေကန်မှရေကို ခပ်ပြီး သယ်ယူ ရောင်းချ နေခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ချို့ယွင်း ချက်ကြောင့် ရသင့်သလောက် အကျိုးအမြတ်မရခဲ့ပါ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်မှာအပြစ်ရှိသည်ဟု တောက်လျှောက် ခံစားနေရပါသည်။ ထိုကြောင့် သခင့်ကို တောင်းပန်ပါသည်။ဖြစ်နိုင်လျင် ကျွန်ုပ်ထိုက်နှင့် ကျွန်ုပ်ကံ စွန့်ပြစ်စေလိုပါသည်။” ဟု အပြစ်ကို တောင်းပန်ရှာသည်။ […]